भ्रमण प्रतिस्पर्धामा विनय तामाङ र मन घिसिङ : कसले बेसी पाउने समर्थक? – खबरम्यागजिन
Homeमुख्य समाचारभ्रमण प्रतिस्पर्धामा विनय तामाङ र मन घिसिङ : कसले बेसी पाउने समर्थक?
दार्जीलिङ पहाड़मा अहिले गोजमुमो (गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा) र गोरामुमो (गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा)-माझ समष्टि भ्रमणको प्रतिस्पर्धानै शुरू भएको छ। जसको अगुवाई दुवै पार्टीका अध्यक्षहरूलेनै गरिरहेका छन्। जसको हातमा एकतर्फ जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेशन) छ भने अर्कोतर्फ एचएडीसी (हिल एरिया डेवलपमेन्ट कमिटी) छ।
यसैले एकतर्फ गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङ जीटीएबाट प्रदान गरिने विकासका योजनाहरूको पोको बोकेर समष्टि-समष्टिको भ्रमणमा अघि बढ़िरहेका छन् भने अर्कोतर्फ गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ पनि हिल एरिया डेवलपमेन्ट कमिटीबाट प्रदान गर्न सकिने विकास योजना बोकेर गाउँ, बस्ती, चियाबगान भ्रमणमा उत्रिसकेका छन्। यसै क्रममा गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङ हिजोदेखि रिम्बीक-लोधोमा समष्टि भ्रमणमा छन् भने गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले पनि तकभर समष्टि छोड्न चाहेका छैनन्।
गत आइतबार मात्रै मन घिसिङले तकभर समष्टिअन्तर्गत पर्ने पातलेबास, मालिधुरा, पत्ताबुङ आदि क्षेत्रको भ्रमण गरेर त्यहाँका धेरै गोजमुमो समर्थकहरूलाई पार्टीमा सामेल गराएका थिए। यसरीनै भोलि फेरि उनले दार्जीलिङ सदर 1 समष्टिमा पर्ने सिङंताम चियाबगानको सुवास ग्राममा एक सभा गर्ने कार्यक्रम बनाएका छन्। यसैको लागि आज पार्टी नेता किशोर गुरूङले यस स्थानको भ्रमण गरेर पार्टीमा सामेल हुन चाहनेहरूसित भेट गरे। यति मात्रै होइन, गोरामुमोले आगामी5अप्रेल पार्टीको स्थापना दिवस पनि यसपाली हेप्पीभेल्ली चियाबगानमा पालन गर्ने निर्णय लिएको किशोर गुरूङले जानकारी गराए।
यसै सम्बन्धमा गोरामुमोको श्रमिक संगठन एचपीडब्लुयू (हिमालयन प्लान्टेशन वर्कर्स युनियन)-का मूलसचिव जेबी तामाङले पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले सिङ्ताम र सोम चियाबगानको भ्रमण गर्ने जानकारी गराए। उनले भने-अब गोरामुमोले जीटीएबाट हुने प्रत्येक विकासका कामहरूको देखरेख वा निरीक्षण गर्नको लागि चियाबगान, गाउँ-बस्ता सबै क्षेत्रमानै निरीक्षण कमिटीको गठन गर्नेछ। ताकि जीटीएबाट हुने विकासको काममा कुनै धाँधली हुन नसकोस् अनि विकास निश्‍चितरूपले जनताको लागि होस्।
विकासको लागि जीटीएमा आएको पैसा पार्टी बिस्तारको लागि खर्च गर्न पाउँदैन। यसमाथि पनि गोरामुमोले विशेषरूपमा ध्यान दिनेछ। यसरीनै गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङसँगै पार्टीका अन्य नेतृत्वहरू पनि पार्टी बिस्तारको क्रममा अघि बढ़िरहेका छन्। जसमध्ये गोजमुमो सुकेपोखरी-मानेभञ्ज्याङ समष्टि एउटा हो। हिजो पार्टी अध्यक्ष रिम्बीक-मानेभञ्ज्याङ समष्टि भ्रमणमा रहेको समयनै गोजमुमो सुकेपोखरी-मानेभञ्ज्याङ समष्टिले पुबुङ-पुसिम्बेङ खण्ड क्षेत्रका 11 वटा शाखा र3वटा प्रशाखालाई लिएर एक सभा गरेको थियो।
जसमा पार्टी बिस्तारसँगै यस क्षेत्रका बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगार बनाउने विषयमा पनि चर्चा-परिचर्चा भएको गोजमुमो समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङले जानकारी गराए। उनले भने-सुकेपोखरी नजिक पुबुङ फाटक र चटाइधुरामा पर्यटन विकासको प्रवल सम्भावना छ। यस स्थानमा स-साना वाणिज्य केन्द्रका साथै होटलहरू स्थापना गर्न सकिन्छ। जसको माध्यमबाट यहाँका बेरोजगार युवा-युवतीहरूले रोजगार पनि पाउऩेछन् अनि दार्जीलिङमा एउटा नयाँ पर्यटन स्थल पनि बढ्नेछ। यसप्रकारले दार्जीलिङ पहाडमा दुइ पार्टीमाझ राजनैतिक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। तरै पनि दुइ पार्टीमाझको राजनैतिक प्रतिस्पर्धाले जनतालाई फाइदा पुगे असल हुने धेरैको मत छ।